Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Joe Willock Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Akụkọ ndụ anyị nke Joe Willock na-agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, ndị nne na nna, ezinụlọ, enyi nwanyị / nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, anyị na-enye gị akụkọ ihe mere eme nke Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara “Joe".
Lifebogger malitere site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama na bọọlụ. Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị dị egwu nke Joe Willock's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise banyere ndụ ya.
Akụkọ ndụ nke Joe Willock- Oge mbu rue ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara ọ bụ otu n'ime ndị na-eto eto na-atọ ụtọ nwere nnukwu atụmanya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Joe Willock nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Joe Willock nke nwata - mmalite ndụ na ezinụlọ.
A mụrụ Joseph George Willock na 20th ụbọchị nke August 1999 na London Borough nke Waltham Forest, United Kingdom.
Amụrụ Willock dị ka nwa nke atọ na nke ọdụdụ nye ndị mụrụ ya - nne mara mma na nna mara mma-nna nke na-akpọ Charles.
Zute nne na nna Joe Willock.
Dabere na TheSun UK, Joe Willock mgbe amụrụ ya ka ndị dibia bekee nwere ogologo ụkwụ dị iche. Nke a pụtara na otu n’ime ụkwụ ya dị mkpụmkpụ karịa nke ọzọ.
Ogbenye Joe na mmalite afọ ndụ ya niile meriri nsogbu anụ ahụ na nke uche nke ụkọ a kpatara. Nke a metụtara ọsọ ya ruo taa ma ọ bụ ya kpatara na ọ bụghị onye kachasị mma.
Ezinaụlọ Joe Willock:
Ọ bụ ezie na a mụrụ ya na England, mana ezinụlọ Joe Willock sitere na agbụrụ Afro-Caribbean. Ha sitere na ezinụlọ ha sitere na Montserratian, Territory Overseas Territory na agwaetiti dị na Caribbean.
Dika edere n'okpuru, Montserratian bu agwaetiti na-echegbu nke ukwuu site na mgbawa ugwu site n'etiti 1990s.
Joe Willock nwere mmalite ezinụlọ ya na mgbọrọgwụ na Montserrat
N’agbata 1995 na 2000, ugwu mgbawa mere ka ụzọ abụọ n’ụzọ atọ nke ndị bi n’àgwàetiti ahụ gbapụ, karịchaa United Kingdom.
Amabeghị ma nne na nna Joe Willock so na ndị gbabara na United Kingdom tupu amụrụ Joe nwa ha nwoke na 1999.
Ndụ mbido: Joe Willock toro na Waltham Forest tinyere ụmụnne ya nwoke abụọ aha ha bụ Matty na Chris. N'oge ahụ, ụlọ ezinụlọ ya, nke dị na North East nke London adịghị anya site na ama egwuregwu mbụ nke Arsenal Highbury.
Ọbịbịa a mere ka e nwee ezinụlọ na-agba bọọlụ. Ọchịchọ maka egwuregwu ahụ mere ka ụmụ nwoke atọ ahụ (Matty, Chris, na Joe) na-eme ka uche ha dị mkpa maka ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ mgbe ha tolitere.
Joe Willock sitere na nzụlite ezinụlọ dị obere. Ma nne ya na nna ya abaghị ọgaranya ma ha na-agbasi mbọ ike ka ezinụlọ ha gaa. Charles na nwunye ya hapụrụ ọrụ ha ozugbo iji hụ ka ụmụ ha ga-aga nke ọma.
Akụkọ Joe Willock nke Childhoodmụaka - Ọzụzụ na andlọ Ọrụ:
Nna Na - enwe Ike: Charles Willock, nna na-agba bọl na onye na-azụ ahịa ezinụlọ ya kpebiri ịmalite njem nke ịtụgharị ụmụ ya nwoke atọ n'ime ndị na-agba ụkwụ.
Charles kụziiri Joe na ụmụnne ya ahapụghị nsogbu ọ bụla, na-akpọrọ ha gaa n'ogige egwuregwu bọọlụ dị iche iche maka ọzụzụ na isonye na asọmpi.
Ọ metụtara ọdịyo nke ụmụ ya nwoke ma mee ihe niile ha nwere ike ime ka ha wee gafee agụmakwụkwọ football kachasị elu.
Nna na-enwe obi ụtọ hụrụ ọhụụ ya maka ụmụ ya na-arụ ọrụ dịka ọ chọrọ. Matty, akpọrọ nwa ya nwoke mbụ ka ọ nwalee ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal, Chris na Joe Willock sochiri ya.
Ọụ nke ezinụlọ ahụ dum enweghị njedebe mgbe ọ hụrụ ka ụmụ nwoke atọ ahụ na-agafe ule na agba na-efe efe ma banye n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Arsenal.
Akụkọ Joe Willock nke nwata - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ọchịchọ Joe Willock maka football hụrụ ka ọ bịanyere aka na nkwekọrịta mbụ ya na Arsenal mgbe ọ dị afọ 4. Maka nna ya dị oke mma Charles, ọ bụ naanị ijide n'aka na ọ dịkarịa ala, otu n'ime ụmụ ya nwoke mere ka ọ bụrụ ndị otu mbụ.
Joe Willock Ndụ Ndụ Mmalite.
Brothersmụnna nwoke atọ ahụ - Matty, Chris na Joe niile mere ọkwa na Gunners. Ha rọrọ na ha ga - abụ ụzọ atọ ụmụ nwoke nwoke na-egwu na Premier League ọnụ.
Nna ha Charles hapụrụ ọrụ ya ọbụghị soro ụmụ ya nwoke gaa ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, ma nyere ha aka ijikwa ọrụ ha na-arụ ọrụ bọl. Dịka Joe Willock tinyere ya;
“Mgbe m na-etolite, papa m bụ naanị onye m na-echekarị banyere ịkọwa egwuregwu m. Emechaa egwuregwu ndị ahụ, ọ na-agwa m ma m mere egwuregwu nke ọma ka ọ bụ nke ọjọọ. Anaghị m ege onye ọ bụla ntị n'ezie belụsọ papa m ”.
Threemụnne nwoke atọ ahụ nwere ọfụma na ọgbọ otu ruo mgbe ihe a na-atụghị anya ya mere otu na mgbe emesịrị, ụmụ nwoke abụọ nke Willock.
Akụkọ banyere Joe Willock - Roadzọ a ma ama Akụkọ:
Ọ bụghị ihe niile mere nke ọma maka ụmụ nwoke Willock n'oge afọ nwata ha na Arsenal. A tọhapụrụ nwanne nwanne Joe Matty mgbe ọ dị afọ 15 n'ihi arụmọrụ na-enye afọ ojuju.
N'aka nke ọzọ, Chris kpebiri ịhapụ na 2017, gawa Portugal iji gaa n'ihu ọrụ ya. Joe Willock bụ naanị onye hapụrụ. N'ikwu okwu banyere ahụmịhe ahụ, ọ kwuru otu oge;
“Ọ dị mkpa ka mụ na ụmụnne m kewaa ma gaa ebe dị iche iche. Ahụrụ m na ọ na-abịa. Ama m na oge na-abịa, otu ụbọchị ebe anyị niile agaghị anọkọ. O meghị ka ọ dịrị m mfe mgbe Chris gara Portugal. ”
Nye Joe, ọ bụ ihe siiri ya ike nke ukwuu mgbe nwanne ya nwoke bụ okenye Chris gawara Benfica. Brothersmụnne abụọ ahụ bụ ndị kacha bụrụ enyi na-anọkọ oge niile kemgbe a mụrụ ha.
“Anyị na-ebikọ n'otu ọnụ ụlọ. Nke a kọwara ịbịaru anyị nso. Mgbe Chris pụrụ, ọ dị m ka ibe m ahapụla ezinụlọ anyị ” kwuru Joe Willock onye ya na football ya ọgụ n'oge ndị ahụ.
Joe Willock Bio - Bilie na-ewu ewu Akụkọ nke:
Joe Willock mechara kwaga dịkaichota ihe ndi otu nke mbu buru ihe ochicho ya.
Ihe ịga nke ọma egwuregwu mbụ ya bịara tupu ya akwụsị ọrụ ntorobịa ya. Nke a bụ oge ọ nyeere ndị otu U17 ibe ya aka ka ha merie Ọchịchị Ọdịnihu.
Joe Willock bụ onye mbụ ọhụụ n'oge ọ bụ nwata.
Na 2017, a kpọpụtara Joe Willock na ndị isi otu Arsenal. N'afọ ahụ ọ nwetara nzere mbụ ya (2017 FA Community Shield) n'egwuregwu ọ bụla na asọmpi ahụ.
Joe Willock - Na-eme ememme nke mbụ ya dị ka onye ọkpọ egwuregwu.
Oge Nkọwapụta: Oge nkwụsị Joe Willock na uwe elu Arsenal bịara na Mee nke 2019 mgbe ọ dochiri Mesut Ozil na-adịghị arụ ọrụ na njedebe nke Njikọ Njikọ.
Achọpụtaghị ekele nke ndị Fans Arsenal ka ha na-achọ ịhụ ya ka ọ bụrụ ndị otu egwuregwu mbụ.
Ma kama ịda, onye midfielder na-eto site n'ike ruo n'ike. Joe Willock nwere Oge nkwụsị ọzọ bịara n'oge 2019 International Champions Cup.
Oge a, ọ nwetara arụmọrụ dị egwu megide ndị etiti Bayern. Willock ji egwuregwu a wee zigara ndị Fans nkwupụta na ya nwere ike ịsọ mpi kachasị mma.
Oge Willock nwetara obi ndi Fans Arsenal.
Joe Willock na mmalite nke oge 2019/2010 gara n'ihu ịtachi obi na meteoric na Arsenal. Ọ hụrụ onwe ya ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma na klọb, ihe omume nke mere ya nkwekọrịta ogologo oge na klọb.
Joe Willock na-emezu Nrọ nwata.
N'otu oge, obere nwa nke sonyere Arsenal dị afọ anọ, mgbe nke ahụ gasịrị, hapụrụ naanị ya ka ọ fewe ọkọlọtọ Willock na-enweghị ụmụnne ya, na-ebizi nrọ ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Joe Willock Ndụ Ndụ - Nwanyị, Nwunye, Childrenmụaka?
Site na mmụba ya na-ewu ewu, ọ ga-ekwe omume na ọtụtụ ndị egwu atụgharịwo uche na ajụjụ ahụ; Onye bụ enyi nwanyị Joe Willock?. Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọmarịcha mma ya agaghị eme ka ọ bụrụ osisi vine mara mma nye ụmụ nwanyị.
Ọnye na-bụ enyi nwanyị Wil Willock?
N'oge edere, ọ dị ka Joe Willock ahọrọla ilekwasị anya na ọrụ ya na-eme ka ọ ghara ịchọpụta inwe enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye. Agbanyeghị, enwere asịrị na-egosi na ọ nwere enyi nwanyị.
Legche Iche: Dị ka TheSun si kọọ, a na-ebo Joe Willock ebubo na ọ na-agbaso nzọụkwụ nke ọjọọ ọjọọ nwata mbụ Arsenal Ashley Cole - site na iji akara na enyi nwanyị mbụ nke ace. Omume Joe hụrụ ndị Fans hụrụ ya ka ọ na-eto eto nwatakịrị na ọdụ.
Dabere na TheSun, E boro ebubo na Joe Willock kpọrọ ya ka ọ bịa London, zụtara ya tiketi Eurostar ma kpọga ya n'ụlọ ịgba egwu naanị ebe ha abụọ dara ihe ọ drinksụ drinksụ ruru £ 2,500.
Emechaa, ma Joe ma enyi ya nwanyị laghachiri n'ụlọ a gbazitere na Kensington ebe ha nọrọ abalị ahụ ebe ahụ, a na-ese ya ese siga hi * py cr * ck.
Mkparịta ụka Joe Willock na Eglantine-Flore Aguilar.
Ndụ Joe Willock nke Onwe:
Tomata ụdị onye Joe Willock ga-enyere gị aka ịmatakwu ya.
Ọbụlagodi na anya dị mfe, Joe bụ onye na-etinye ike dị ukwuu n'ọchịchọ ya iji nweta ihe ọ bụla ọ chọrọ na n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ọ na-eme.
Ndụ ya n'èzí football.
Nakwa na ederede onwe gị, Joe Willock gosipụtara na ọ bụ onye gbanwere agbanwe, onye na-egosi na ọ gbasoro ụzọ ezi omume site na nkwenkwe okpukpe ya.
Foto dị n'okpuru chịkọtara Okpukpe ya kwenyere na eziokwu ahụ bụ na o si n'ụlọ Ndị Kraịst.
Joe Willock Religion kọwara
Eziokwu nke Joe Willock Family Life:
Obi abụọ adịghị ya, a na-ahụ ezinụlọ Willock dị ka n'etiti ezinụlọ ndị nwere ihe ịga nke ọma football na-enwe kasị dị umeala n'obi nke mmalite. Lee, anyị ewetara gị ụfọdụ ozi gbasara ndị ezinụlọ niile.
Joe Willock Nna: Anyị niile maara banyere mbọ Charles na-agba mbọ ịhụ na ụmụ ya nwoke ghọrọ ndị ọkachamara, si otú a na-ahụ ya dị ka onye njikwa maka ụmụ ya.
Otú ọ dị, according na Otu agbụrụ, Charles Willock bụkwa onye na-akọwa bọọlụ nwere ndenye aha na Wyscout, usoro ikpo okwu bọọlụ na-enye ya ozi dijitalụ na nyocha karịa klọb 1,000.
Ihe ikpo okwu a na - enyere ya aka ịchụ egwuregwu ụmụ ya na mpaghara azụmahịa ndị ọzọ. “Ọ na-elele egwuregwu anyị niile na n'otu n'otu ọ bụla ugboro ugboro, ”Ka Joe Willock kwuru
Nne Joe Willock: Amabeghị ihe banyere mama Joe dịka a na-eche na ọ na-ebi ndụ dị jụụ.
Nke a anaghị egbochi nwa ikpeazụ ya bụ Joe ịnakwere ya n'ihu ọha wọ bụ ozi dị ụtọ na Instagram ya nke na-aga n'okwu ya;
Mama, nke a bụ maka oge niile m hụrụ ka ị na-arụ ọrụ n'oge mbubreyo ahụ, yana oge ị na-ejichaghị ike ka m rie. Oge ị jiri abụ m nọrọ n'ụra mgbe ị lọghachitere ọrụ. A hụrụ m gị n'anya mama. Ezi ncheta ọmụmụ!!
Joe Willock raara mama ya na-eto Eto n'ime ozi dị ụtọ nke dọtara karịa mmasị 24K.
Nwanne Joe Willock: Ị maara?… Brothersmụnne nwoke abụọ nke Willock - Matty na Chris anaghị esi na Arsenal pụọ na-esonyeghị klọb ka mma.
Mgbe a hapụrụ Matty na 15, ọ nwetara ọchioma ịgafe ule na Manchester United tupu emesịa hapụ Gillingham. N'aka nke ọzọ, Chris were ahia ya na Benfica mgbe ọ gbanwere London na Lisbon.
Ndụ Joe Willock:
Ikpebi n’etiti ịdị mma na ihe ụtọ abụghị nhọrọ siri ike maka Joe Willock ebe ọ maara etu esi ejikwa ego ya.
N'ihi ezi ntọala sitere na nne na nna ya Joe anaghị ebi ụdị ndụ na-adọrọ adọrọ nke ọtụtụ ụgbọala dị oke ọnụ na-ahụkarị.
Eziokwu nke ndụ- Ọ na-ebi ndụ dị mfe Ọ B NOTGH one onye ọhụụ ga-ahụ ya.
Joe Willock Eziokwu na-adịghị agbanwe agbanwe:
OMOAKA Atọ bi na ndu ha: Ị maara?… Brothersmụnna nwoke atọ ahụ jikọtara ọnụ na Premier League Match.
N'agbanyeghị ọtụtụ afọ, afọ atọ na-egwuri egwu n'otu egwuregwu Egwuregwu Premier League 2.
Wilmụnna Willock. Matty guzo n’etiti (Chris), Chris (n’aka nri) na Joe (n’aka ekpe).
Matty sere n'elu na-egwuri egwu na Red Reds uwe na ọdụdụ (Joe Willock) si na bench pụta isonyere nwanne ya nwoke Chris na egwuregwu Premier League 2 nke mere gburugburu ọnwa nke May 2017.
Ọkachamara nke Oz: Fansfọdụ ndị egwu na-akpọ ya Ọkachamara nke Oz nanị n'ihi na ya na ya jikọrọ ọnụ Dani Ceballos so na ndị na-etiti etiti ahụ kpebisiri ike iwepụ Mesut Ozil n'ọkwá ya dị ka onye egwuregwu egwuregwu mbụ.
Ozil n'ọtụtụ oge lere anya n'ubu ya n'ihi asọmpi maka ebe ya.
Ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu Arsenal ka edoziri Ozil.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Akụkọ nwata Joe Willock gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.